Baolina kitra - «UFFOI 2019» :: Takin’ny teknisiana ny halavan’ireo mpilalao • AoRaha
Baolina kitra – «UFFOI 2019» Takin’ny teknisiana ny halavan’ireo mpilalao
Mandalo sivana ireo mpilalao latsaky ny fito ambin’ny folo taona mikasa ny hiditra ao anatin’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra hiatrika ny fifaninanana eto amin’ny ranomasimbe Indiana na “Union des Fédérations de Football de l’Océan Indien” (UFFOI) amin’ny volana novambra.
Takin’ny teknisianina ny halavan’ireo mpilalao miaraka amin’ny fahaizany ny taranja. « Isan’ny sivana hijerena ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena ny halavana. Hiaraha-mahita fa lava kokoa ireo mpilalao any amin’ireo firenena hafa eto amin’ny ranomasimbe Indiana », hoy Rakotomanga Pierrot, tompon’andraikitra voalohany amin’ny fitiliana.
Mpilalao manodidina ny efajato no tonga namaly ny antso, omaly, teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Nifarimbona ny seksiona sy ny Ligin’Analamanga nitily ireo mpilalao misongadina. Hitohy amin’ny sabotsy ho avy izao ny fifaninanana mandra-pahazo ireo mpilalao telopolo hanaraka ny fampivondronana. “Tsy nanavaka izahay na mpilalao any amin’ny fokontany na anatin’ny sekoly fianarana ny baolina kitra. Mbola afaka miditra ihany koa ireo mpilalao hafa izay mbola tsy tonga anio (ndlr: anio)”, hoy hatrany ity teknisiana ity.
Baolina kitra – CHAN 2020 :: Niampy mpilalao telo ireo hofantenana Barea